ဘေဘီလေးက ဘယ်အရွယ်ဆို ငရုတ်သီး စားလို့ ရပြီလဲ ....... - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 26/11/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဘေဘီလေး တွေက အသက် ၆ လ ပြည့်ပြီဆိုရင် အစာမာ စစားလို့ ရပါပြီ။ ဒီလို စစားလို့ ရပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ လူကြီးတွေ စားသလိုတော့ ထမင်း၊ ဟင်းတွေ စားလို့ မရသေးပါဘူး။
အသက် ၆ လပြည့်ချိန်မှာ ဘေဘီလေးတွေက ထမင်းကို သေချာတိုက်ပြီး ကျိုထားတာကို ကြက်သားအရေခွံမပါဘဲ ပြုတ်ထားတဲ့ ပြုတ်ရည်၊ သေချာ ကြိတ်ခြေထားတဲ့ ရွှေဖရုံသီး၊ မုန်လာဥနီတွေနဲ့ စစားရတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ အသက် ၁ နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ အရင် ၆ လကထက် အစာတော်တော်များများကို စားတတ်လာပြီ။ စားလို့လည်း ရလာပြီဆိုပေမယ့် မေမေ၊ ဖေဖေတို့ စားသလို ငရုတ်သီး စပ်စပ်လေး၊ အရောင်လှလှလေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေကိုတော့ စားလို့ မရသေးဘူးပေါ့။
ဒါဆို ဘယ်အရွယ်ရောက်မှ ဘေဘီလေးက မေမေဖေဖေတို့နဲ့ ဟင်းတစ်အိုးတည်း အတူတူစားပြီး ငရုတ်သီး စစားနိုင်မလဲဆိုတာကို သိချင်နေပြီလား မေမေ …… ဒါဆိုရင် ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ဘေဘီလေးက ငရုတ်သီး စားလို့ရလား …….
ဘေဘီလေးက ငရုတ်သီး စားလို့ရလားဆိုတော့ အရမ်းငယ်သေးရင်တော့ မရပါဘူး။ ထိုက်သင့်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ သဘာဝ အတိုင်း စိုက်ပျိုးထားပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းလိုမျိုး၊ ငရုတ်ပွလိုမျိုး အရာတွေကို စစားလို့ ရပါပြီ။
ဘေဘီလေးက ဘယ်အရွယ်ဆို ငရုတ်သီးစားလို့ရလဲ …….
ဘေဘီလေးက အသက် ၁ နှစ် ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို သဘာဝအတိုင်း စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ငရုတ်သီးကို စားလို့ ရပါတယ်။ ငရုတ်သီးက စပ်တဲ့ အရသာ ရှိတာကြောင့် ဘေဘီလေးတွေ ကြိုက်လောက်တော့ အရသာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ မိခင်နို့ သောက်စဉ်က မေမေက အစပ်မရှောင်ဘဲ စားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးက အစပ် ပိုစားနိုင်ပါတယ်။ မေမေက နို့တိုက်နေစဉ်မှာ အစပ်ရှောင် စားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးက ငရုတ်သီးရဲ့ စပ်တဲ့ အရသာကို မစားနိုင်တာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ငရုတ်သီးက စပ်တဲ့အရသာ ရှိတာရယ် အခန့်မသင့်ရင် လူကြီးတွေမှာတောင် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ဘေဘီလေးကို အသက် ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်ရောက်မှ နည်းနည်းချင်း စကျွေးကြည့်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
ငရုတ်သီးစိမ်းကို စကျွေးချိန်မှာလည်း ဘေဘီလေး စားနေကျ ဟင်းထဲကို နည်းနည်းချင်းစီ ထည့်ပြီး ချက်ကျွေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ငရုတ်သီးကို အစိမ်းတို့စေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဘေဘီလေး ရင်ပူတာ၊ အစာအိမ်နာတာတွေ ခံစားရနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဥပမာ – ပုစွန်ထဲကို ငရုတ်သီးစိမ်း နည်းနည်းလောက် ထည့်ကြော်ပေးတာ၊ အသား (အရေခွံ၊ အဆီ မပါ) ထဲကို နည်းနည်း ထည့်ကြော်ပေးတာ၊ ကြက်ဥမွှေကြော်ထဲကို နည်းနည်း ထည့်ကြော်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ဒီလို လေး ကျွေးပေးတာက ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေဘဲ ငရုတ်သီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင် C၊ ဗီတာမင် B6၊ သံဓာတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတင်းတို့ကို ရရှိစေမှာပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။
ဘေဘီလေးကို ငရုတ်သီး စားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတာက ရေရှည်မှာ ဘေဘီလေးကို ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေပါတယ်။ ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ sinus infections နဲ့ နားပိုးဝင်တာမျိုးတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို အသက် ၆ နှစ် မကျော်မချင်း ငရုတ်သီးခြောက်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်တွေကို မကျွေးတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
When can my baby eat spicy foods? https://www.babycenter.com/baby/solids-finger-foods/when-can-my-baby-eat-spicy-foods_1368539#:~:text=You%20can%20introduce%20herbs%20and,child%20starts%20eating%20finger%20foods.&text=But%20wait%20until%20your%20baby,flavors%20in%20your%20child’s%20diet. Accessed Date 26 November 2021
Are Hot PeppersaDanger to Kids? https://oureverydaylife.com/hot-peppers-danger-kids-24941.html Accessed Date 26 November 2021